Torohevitra hitsidihana ny Museum Ghibli any Japon | Vaovao momba ny dia
Torohevitra hitsidihana ny Museum Ghibli any Japon
Mariela Carril | | soso-kevitra, Tokyo
Raha tianao ny sary mihetsika Japoney dia tokony hihaona ianao Miyazaki Hayao, zavatra toa ny Walt Disney Japoney. Ity lehilahy antitra ity dia namokatra sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika nanomboka ny taona 60 ary ny asany rehetra dia namirapiratra noho ny antony iray na hafa.
Izy no mpamorona ny Princess Mononoke, Totoro mpiara-monina amiko, Miakatra ny Rivotra, Ny lapan 'ny Laka Incredible or Ailiky ny Fanahy fa manana asa taloha ihany koa izay mahafinaritra sy maro hafa izay tsy dia be mpahalala any Andrefana. Ny fitsangatsanganana any Japon ho an'ny mpankafy manga / anime dia tsy vita tanteraka raha tsy misy a mitsidika ny Ghibli Museum koa raiso ireo torohevitra ireo satria misy pitsopitsony tokony ho raisina.
1 Vidio ny tapakilan'ny Ghibli Museum
2 Ahoana ny fomba hahatongavana any amin'ny tranombakoka Ghibli
3 The Ghibli Museum
Vidio ny tapakilan'ny Ghibli Museum
Raha te-handeha ianao dia manoro hevitra anao aho mba ho zavatra faharoa novidinao aorian'ny tapakilan'ny fiaramanidina. Ny zavatra dia tsy mora ny mahazo tapakila satria voafetra ny toerana sy ny ora. Vidina an-tserasera izy ireo ary tsy maintsy mampiditra ny angon-drakitrao ianao ary mifidy ny andro sy ny fotoana hitsidihana. Ny olana dia rehefa mipetraka any Amerika atsimo ianao satria tsy misy carte de crédit azonao ampiasaina ary mahasosotra ny manandrana hatrany hatrany. Manana namana izay nanjary kivy be aho.
Ny vahaolana dia ny fananana olona any amin'ny firenena hafa izay afaka mahazo ny tapakila ho anao. Raha Japoney dia tsara kokoa. Nanao izany ny namako ary avy eo, tamin'ny filaharana teo am-baravarana, dia nirohotra hiresaka tamin'ny mpiasa izy ireo hanazava ny zava-misy satria nomena ny anarany ny tapakila. Ary amin'ny teny Japoney! Soa ihany fa tsy nisy ny olana.
Inona no safidy hafa raha tsy manana namana Japoney ianao? TSARA indray mandeha any Japon dia mandeha any amin'ny iray amin'ireo fivarotana mora làlana Lawson ianao (Fotsy sy manga izy ireo miaraka amina tavoara-dronono ho famantarana), ary ao no ahitanao a milina fivarotana mandeha ho azy.
Ny tsara indrindra dia ny mangataka fanampiana satria afaka misavoritaka ianao amin'ny fampiasana azy, na dia tsy dia sarotra loatra aza. Raha tsy misy tapakila amin'ny andro tadiavinao dia mijery hatrany amin'ny kalandrie ianao mandra-pahitanao andro hafa tsy misy fitsidihana. Fa avelao aho hiteny aminao fa mety hahasosotra ihany koa izany satria i Miyazaki dia malaza be ary misy mpitsidika foana. Nandritra ny fotoana vitsy dia efa nahazo fizahan-tany aziatika betsaka i Japon, indrindra ny sinoa, ka dia mihinana ny zavatra rehetra.
Izany no izy ny fividianana tapakila mivantana any Japon dia ahiana ho lany ny azy ireo. Nitranga tamiko izany tamin'ny 2016 ary tena nampalahelo. Ho tena akaiky sy miaraka amin'izay. Na izany aza, raha tsy manana safidy hafa ianao ary te-hitsidika ny tranombakoka dia mankanesa any Lawson haingana araka izay tratra. Arakaraka ny haingana no tsara kokoa. Ohatrinona ny tapakila mankany amin'ny tranombakoka Ghibli? 1000 yen tsy misy zavatra hafa, eo amin'ny $ 10.
Ahoana ny fomba hahatongavana any amin'ny tranombakoka Ghibli
Ny tranombakoka dia tsy lavitra ny afovoan'i Tokyo ary tonga amin'ny alàlan'ny lamasinina eo an-toerana ianao. Raha manana ny Japan Rail Pass ianao dia voasarona ny dia, saingy tsy lafo koa izany. Manatona ny gara Shinjuku ianao, iray amin'ireo be mponina indrindra ao Tokyo, ary mitady ny sehatra misy ny Chuo Line ho any Mitaka. Mila mitandrina amin'ny fiaran-dalamby Japoney ianao satria ara-potoana sy mivezivezy be dia be, noho izany dia tsara ny manontany olona momba ilay lampihazo: Mitaka iku? Na tandremo ny zava-misy fa ny fiaran-dalamby, eo amin'ny fiara eo aloha, dia milaza izany amin'ny famantarana mamirapiratra.
Avy any Shinjuku dia fiara 15 ka hatramin'ny 20 minitra. Raha tsy misy ny Rail Rail Japan dia zara raha mandoa ianao 320 yen mandroso sy miverina. Ary eo amin'ny fiantsonana Mitaka sisa no ataonao dia ny manaraha ny famantarana ... ary ny olona! Raha tsara ny andro, dia tsara kokoa ny mandeha an-tongotra noho ny bus, fa satria tsara be ny bisy, afaka mandeha bus ianao ary miverina miverina any amin'ny gara. Kely sy mavo ary voaravaka endri-tsoratra Miyazaki ny bisy. Izay no tsy misy tsy mahita an'io!
Ny bisy sy ireo olona misafidy ny handeha ho any amin'ny tranombakoka dia manaraka ny lalana iray ihany. Miala amin'ny gara izy ireo ary mitafy lakandrano milahatra hazo milamina. Avy eo dia nivily lalana izy ireo izay manamorona ny valan-javaboary iray avy hatrany, Inokashira Park. Ao anatin'ny valan-javaboary, metatra vitsivitsy monja miala ny arabe, no misy ny tranombakoka. Tonga ianao rehefa avy nandeha an-tongotra 20 na minitra teo ho eo.
Izy io dia fananganana mahazatra ny endrika maritrano izay hitantsika amin'ny sarimihetsika Miyazaki. Avy any ivelany dia toy ny trano ao amin'ny Lohasahan'ny Rivotra, avy amin'ny sarimihetsika Nauusica. Ny loko maivana, ny endrika boribory, ny tilikambo izay ahitàna ny robot misy ireo izay miseho ao Laputa, Castle in the Sky, izay toa mijery antsika.
Raha vanim-potoana avo, fahavaratra, lohataona na taom-baovao Sinoa dia misy ny olona ka misy filaharana lava. Soa ihany fa ny fahombiazan'ny Japoney dia mahatonga azy io hikoriana haingana be. Misy ny mpiasa manamarina ny fidirana ary mandroso eo am-baravarana ianao, varavarana hazo misy varavarankely fitaratra miloko miloko voaravaka endri-tsoratra malaza. Raha any ivelany dia trano iray hafa avy amin'ny sarimihetsika nataon'i Hayao Miyazaki, ao anatiny dia afaka milaza izany ihany isika, saingy miova tanteraka ny fomba.
Ao anatin'ny tranombakoka dia misy trano fonenana anglisy taonjato faha-XNUMX iray amin'ireo izay manintona tsara amin'ny sarimihetsika marobe. Kiki's, The Moving Castle, Porco Rosso. Ary avelao aho hiteny aminao, tsy eto Disney ianao eto. Tsy misy plastika, tsy misy zavatra manahirana afa-tsy kalitao ary kalitao kokoa: gorodona hazo ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny tena malalaka, tohatra misy fantsom-baravarana kanto sy voadio tsara, ascenseur vy antitra misy bokotra resina, tohatra miolakolaka izay mampifandray gorodona roa ary tian'ny ankizy ...
Nomena bokikely amin'ny fiteny maro ianao, miaraka amin'ny tapakila, miaraka amin'ny anglisy, miaraka amin'ny sary amin'ny trano sy ny tontolo iainany. Manoro hevitra anao hanao fitsidihana ianao ary avy eo afaka mijanona ao anatiny mandritra ny fotoana tianao. Inona avy ireo toerana mamorona an'io zotra io? Misy ny Efitrano fampiratiana maharitra «Izay nahaterahana sarimihetsika», izay ahitanao ireo sary mihetsika ary ohatra, kodiarana goavambe izay manana ambaratonga samihafa amin'ny saribakoly Totoro, Satsuki ary Mei, am-polony amin'izy ireo amin'ny toerana samy hafa izay rehefa manomboka mihodina dia mamorona sehatra hetsika mitohy mahafinaritra.
ihany koa misy sinema-teatra. Manome anao tapakila manokana izy ireo amin'ny fidirana ary afaka manatrika ny fandefasana horonantsary fohy natao ho an'ny tranombakoka ianao. Tsy ho hitanao intsony izy eto. Mahafinaritra ny teatra, amin'ny hazo, ary ny fohy dia maharitra minitra vitsy monja. Misy ny hafa efitrano izay mamerina ny fianaran'i Miyazaki miaraka amin'ny boky, sary, borosy, akanjo, vatomamy tiany indrindra, ireo boky mitaona azy hanao sary ...
Mazava ho azy misy fivarotana ihany koa, ny Mamma Aiuto Store!, miaraka amina entana maro hividy. Na dia misy fivarotana Ghibli manerana an'i Japon aza dia hahita zavatra manokana eto ianao: ny pendant mamirapiratra an'ny Laputa Castle in the Sky, ohatra, thermos Totoro, kapaoty, akanjo ba ... Tsara ny fitsidihana na dia betsaka aza ny olona miantsena.
Amin'ny rihana ambony dia misy faritra manokana ho an'ny ankizy izay saro-piaro amin'ny olon-dehibe: misy a nekkobasu na catbus goavambe, tototry, ho an'ny ankizy hilalao. Mahagaga! Misy koa terrasse kely ary avy eo misy tohatra vy miakatra amin'ny tilikambo misy mpitsidika mandray ilay robot. Mahafinaritra izany.
Hadinoko ny nilaza an'izany Tsy avela miditra ao amin'ny tranombakoka ny sary na ny horonan-tsary ary hentitra be ry zareo momba an'io, na dia hitako aza fa maro no nanjary hendry tamin'ny findainy. Ny toerana tokana ahafahanao maka sary dia any ivelany Ka etsy ambony miaraka amin'ny robot no manomboka mitifitra ny rehetra.
Ary mba hamaranana ny fitsidihanao azy, ny torohevitra omeko dia ny hiala sasatra ao amin'ny cafeteria. Mifanohitra amin'izay eritreretintsika fa ny fisotroana kafe eto dia avoakan'izy ireo ny lohanao, soa ihany fa toy ny any Japon rehetra izany. Hajaina ny vidiny, tsy mihoampampana mihitsy izy ireo, na inona na inona sokajy misy ny toerana misy anao. Ary alohan'ny hiverenanao any amin'ny gara, mitsangatsangana amin'ny trano fidiovana. Mahafinaritra! Goavana izy ireo, misy rindrina mihosin-drindrina, varavarana hazo ary faucet taloha. Ny hakantony!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Tokyo » Torohevitra hitsidihana ny Museum Ghibli any Japon
Inona no ho hita sy atao any Aix-en-Provence, France
Hanokatra ny Torre de la Cautiva ho an'ny besinimaro ihany ny Alhambra amin'ity volana ity ihany